KPZ: အော်တိုက်ကဒ် ဖျက်ပိုး
2 comments - Postacomment Labels: Virus, ဗဟုသုတ
သီးနှံတွေကို ပျက်စီးအောင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အရာတွေကို သီးနှံဖျက်ပိုးလို့ ခေါ်ရင် အော်တိုကဒ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ အရာကို အော်တိုကဒ်ဖျက်ပိုးလို့ ခေါ်နိုင်တာပေါ့လေ။ ခုနောက်ပိုင်း နည်းပညာတွေ အံ့မခန်းတိုးတက် လာတာနဲ့အမျှ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ကပ်ပါလာတာ အထင်အရှားပါ။
အခု ဗိုင်း၇ပ်ကတော့ အော်တိုကဒ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဗိုင်း၇ပ်တစ်မျိုးပါပဲ။ အဲဒီ့ကောင် နာမည်က acad.lsp တဲ့....သူက Auto cad scripting Language ထဲကို ၀င်ရောက်နေ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ဗိုင်းရပ်ကို text file တစ်ခုအနေနဲ့ (.dwg)ထဲကို ၀င်ရောက် လာပါလေရော။ ဒီဗိုင်းရပ်ကို Auto cad start up function နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ဒီကောင်က အော်တိုကဒ်ဖိုင်ထဲမှာ ၀င်ပုန်းနေတတ်ပြီး သူရှိနေတဲ့ အော်တိုကဒ်ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူက ပျော်ပျော်ကြီး အသက်ဝင်လာတော့တာပဲ။ အဲဒီ့ အချိန်ကစပြီး အော်တိုကဒ်ထဲက Pan, Zoom, Exref, X bind, Express Toolbar စတဲ့ဟာတွေ သုံးလို့ မရတော့ဘူး ဖြစ်ပါလေရော ။ ကဲ.. သူငယ်ချင်းတို့ အော်တိုကဒ် ပုံတွေဆွဲတဲ့ အခါ အဲလို Command တစ်ချို့ သုံးမရဘူး ဖြစ်နေပီ ဆိုရင်တော့ ဗိုင်းရပ် ကိုက်နေတာ သေချာနေပီနော်။ နောက်တစ်ခု အော်တိုကဒ် ဖိုင်တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါ မေးလေ့မေးထ မရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးပါတယ်တဲ့။ အဲဒီ့အခါ ဘာကိုမှ ပြန်မဖြေပဲ အဲဒီ့ဖိုင်ကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။ ( ကေပီဇက်လည်း မကြုံဘူးတော့ ဘာတွေမေးတယ် ဆိုတာတော့ သေချာမသိဘူးနော်။ စမ်းလည်း မစမ်းသပ်ရဲဘူး ။ ကြုံဘူးတဲ့လူရှိရင် ပြောပါနော်.. ဘာတွေ မေးတယ်ဆိုပြောပြပါနော်။ )
System Properties ကို Disable လုပ်ပါ။
လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ အော်တိုကဒ်ဖိုင်တွေ အားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပါနော်။ သူငယ်ချင်းစက်မှာ ရှိတဲ့ AntiViru Software တစ်ခုခုကို Full Scan လုပ်လိုက်ပါ။ စက်မှာပေါ်လာတဲ့ Detected File တွေအားလုံးကို ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်ပါပီ......
( ဒီပို့ရေးဖြစ်အောင် အချက်အလက်တွေ ပေးပြီး ရေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ ကိုသန့်ဇင်ဦးအား အထူးပင် ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်နော်)
MTZO - April 29, 2009 at 3:16 PM
This virus manifests as an AutoLisp file (the language used for scripting in the AutoCAD application). It is found in the file "acad.lsp" located in the current working directory alongside with the *.dwg files. This file is automatically executed on loading the drawing file. The virus is then copied as 'acadapp.lsp" to the AutoCad Support directory and will execute on the startup of the ACAD application.
Three AutoCad commands will be disabled - EXPLORE, XREF and XBIND. The virus will then create defineanew command BURST, which will displayamessage.
When starting AutoCad, it requests you to approve running an acad.lsp file.
Hatch/ Pan commands no longer work.
You will find files called acad.lsp and acadapp.lsp, of approximately 110KB in size. If you open one of these files using notepad, you will find numerous blank lines and spaces,
which "hide" the actual commands.
Numerous sites have stated that the drawing files are not affected, however to be safe, please do not save any drawing files after you find these symptoms.
Instead, close AutoCad ASAP and check for the presence of these acad.lsp and acadapp.lsp files and follow the removal process below.
Shutdown AutoCad, search for and remove all instances of acad,lsp and acadapp.lsp files which are of approx. 110KB in size, in your network folder as well as your local drives.
phyo - April 29, 2009 at 9:22 PM
You are viewing "အော်တိုက်ကဒ် ဖျက်ပိုး"
Filed under Labels: Virus, ဗဟုသုတ